तनहुँकी इन्दिराले आफ्नी २ वर्षकी छोरीलाई यसरी बाघको पन्जाबाट खो’सीन् (भि”डियो हेर्नुहोस्) – Sandesh Press
January 17, 2021 176
नेपालमा भर्खरै मात्र एउटा् निकै नै अच”म्म तथा आ”स्चर्यलादो घ”टना घटेको छ । तनहुँ जिल्लाकि इन्दिरा न्यौपानेले आफ्नी दुई वर्षकि छोरीलाई बाघको पन्जाबाट खो”सिन । अहिले यी महान आमाको चारैतिर बाट च”र्चा परिचर्चा भइरहेको छ ।
इन्दिराले साँझको ७ बजे तीर धारामा जाँदा छोरीलाई साथ’मा नै लिएर धारामा गइन् ।धारामा पानी भर्न लागेका बेला ए”क्का’सी आएको बाघले उनकी २ वर्षकी छोरीलाई मु”खमा च्यापेर लग्यो । त्य”सप्स्चात लग्दै गर्दा इन्दिराले सहजै बाघको सामना गरेर बाघको पन्जा”बाट खो’सेर ल्याउन सफल भइन ।
छोरीलाई मुखले च्या’पेर दौडीदै गरेको बाघको पन्जाबाट आँफुले खो’स्नु कुनै चानचुने कुरा हैन तर इन्दिरा सफल भइन । अब हेर्नुस यीनै महान आमा इन्दिरासँग गरिएको कुरा’कानी हेर्नुहोस् ।
Prevबस र ट्रक आपस ठोक्किदा ११ जनाको मृ’त्यु ७ घा इते
Nextनायका केकी अधिकारी दुलही बनिन्
सवारी दु’र्घटना हुँदा ३१ जनाको मृ’त्यु
एकाबिहानै दुःखद खबर;एकै परिवारका तीन जनाले भि’रबाट हा’म फा’ले ३ नै जना को मृ’त्यु !
दुःखद खबर किर्तिपुरको आयुर्वेद कलेजमा डाक्टर पढ्दै गरेकी १७ बर्षकी गायत्री भट्टको मृ’त्यु!!
स्कूल बसवाट खसेर ६ कक्षामा पढ्ने विद्यार्थीको घटनास्थलमै मृत्यु (1505)